အစစ်အမှန်အိမ်ရှင်မများအသားတင်ရကျိုးနပ် - အချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မကဘယ်သူလဲ။ - သတင်း
အဆင့် - တရားဝင်အားလုံးထဲမှာအချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မကဘယ်သူလဲ။
ရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများအပေါ်ပြဇာတ်သည်မယှဉ်နိုင်ပါ ((တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်တရားစွဲနေသည့်ကြွယ်ဝသော၊ လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးများ) သည်၊ ၎င်းသည်ဇိမ်ခံဘဝပုံစံကိုအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောတီဗွီဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော့်အအေးမိအိမ်မှာ Pot Noodle ကိုစားနေရင်းထိုင်နေရင်း Bentleys နှင့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များတွင်အချမ်းသာဆုံးသောအာဟာရဓာတ်များကိုအချိန်ကုန်သက်သာခြင်းထက်ခဏတာယာယီပြင်ဆင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ သို့သော်အချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မသည်မည်သူဖြစ်မည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလော။ Rolexes အများဆုံးနှင့်အတူ၊ စိန်အများဆုံးနှင့်အတူအိမ်ရှင်မအားလုံး၏အိမ်ရှင်မဖြစ်သည်။
အောက်တွင် Rolex နာရီ ၅၀ ခန့်နှင့်ညီမျှသောရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ သင်ဘယ်လောက်အထိဆင်းရဲနေတယ်၊ ​​ထိပ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မ ၁၀ ယောက်ဟာဘယ်လောက်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရစေချင်ရင်စာဆက်ဖတ်ပါ။
၁၀။ Kandi Burruss - ဒေါ်လာ ၃၀ သန်း
Instagram မှတစ်ဆင့် @ နှင့်
ဒါကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ သည် Kandi Burruss မှစတင်သည်။ ဤအချက်သည်စာရင်းထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်တန်ဖိုးအနိမ့်ဆုံးရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများ၏အသားတင်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ Todd Tucker (အတ္တလန်တာ၏ Real Housewives ထုတ်လုပ်သူဟောင်း) နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး Kandi သည်ဒုတိယရာသီကတည်းကပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်သန်နေထိုင်ပြီးအိမ်ရှင်မများကိုရှူရှိုက်ရသည်။ Kandi သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်စံချိန်တင်သန်း ၃၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည့် R&B အဖွဲ့ Xscape တွင်လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ သန်း 30 Kandi ရဲ့ကံကောင်းအရေအတွက်ကိုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
Tinsley Mortimer - ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း
Instagram မှတစ်ဆင့် @ ။ ။
ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိသားစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမ၏ဖခင်သည်အိမ်ခြံမြေမြှုပ်နှံသူနှင့်သူမအမေ၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လာသောသူမ၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဆွဲအိတ်များနှင့်အတူ Tinsley သည်လည်းသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်မျဉ်းကိုပင်ပုံဖော်ခဲ့သည်။ သူမသည်ရုံ All- ပတ်ပတ်လည်ကြွယ်ဝသော tbh ပါပဲ။ သူမ၏ခွေးများပင်ကြွယ်ဝစွာကြည့်ရှုကြသည်။
၈။ Heather Dubrow - ဒေါ်လာသန်း ၄၀
Instagram မှတစ်ဆင့် ချစ်သူ
ဟဲလ်ရဲ့ $ 40 သန်းကံဇာတာသရုပ်ဆောင်အတွက်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကနေတည်ဆောက်ခဲ့သည်, သူသည်ထိုကဲ့သို့သောဟာဝိုင်ယီငါး - အိုနှင့်ဒါကဘဝအဖြစ်စီးရီးအတွက်လူကြိုက်များအခန်းကဏ္ had ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် Orange County ရှိ Real Housewives အသင်း ၀ င်ဖြစ်ပြီးပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်ဖြစ်ပြီး Botched တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သော Terry Dubrow နှင့်လက်ထပ်သည်။ ရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည့်ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအကြောင်း ...
၇ ။ Jill Zarin - ဒေါ်လာသန်း ၄၀
Instagram မှတစ်ဆင့် @ mrsjillzarin
Jill Zarin သည်သူ၏ကံကြမ္မာကိုလက်ထပ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၃၅ သန်းပိုင်ဆိုင်သော Bobby Zarin (Zarin Fabric Warehouse ပိုင်ရှင်) နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဤပုံတွင်သူမ၏အကောင်းဆုံးဘဝကိုရှင်သန်နေဟန်ရှိသည်။ ငါသူမ၏ဒီဇိုင်နာနေကာမျက်မှန်တွင်ဒေါ်လာသန်း ၄၀ ကိုတွေ့နိုင်သည်။ Jill ဟာသူမ Louis Vuitton အိတ်ထဲကငါ့ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုပြသနေတယ်
၆။ Yolanda Hadid - ဒေါ်လာ ၄၅ သန်း
Instagram မှတစ်ဆင့် yolanda.hadid
အိုးယိုလာဒါသည် Lemon နှင့်သူမ၏ကလေးများ Gigi, Bella နှင့် Anwar (သူတို့အားမျိုးဗီဇ Tho) ကိုစွဲလမ်းနေသောအသန့်ရှင်းဆုံးအိမ်ရှင်မများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်သာရှိသေးသည့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး မှသတိပြုမိသောကြောင့်မော်ဒယ်လ်သည်မိသားစုအတွင်းတွင်သာရှိသည်။ မိုဟာမက် Hadid မှ Yolanda ရဲ့ကွာရှင်းသူမ၏ရလဒ် Malibu အတွက် $6သန်းအိမ်သူအိမ်သားအများအပြားကားများ, ငွေသား $ 3.6 သန်း၏တစ်ကြိမ်ပေါင်းလဒ်အခကြေးငွေနှင့်လစဉ်ကလေးထောက်ပံ့မှုအတွက် $ 30,000 အပါအဝင်တစ် ဦး အခြေချလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ RHOBH ရာသီအတွက်တစ်လဒေါ်လာဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ လစာကောင်းကောင်းရကောင်းရလိမ့်မည်။
5. Dorit Kemsley - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
Instagram မှတစ်ဆင့် မင်္ဂလာပါ
၎င်းသည်ဝိုင်ဖန်ခွက်များတွင်သူမပါဝင်သောသူမ၏ရှမ်ပိန်အပေါ်တွင် RHOBH တွင်ဒရာမာစတင်ခြင်းရှိမရှိ၊ သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Paul 'PK' Kemsley ၏နှစ် ၅၀ ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျင်းပရန်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသည် ရွက်လှေ, Dorit Kemsley ဇိမ်ခံကားအတွက် relishes ။ ယခုသူသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရေကူးဝတ်စုံအမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး Boy George နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်။
4. Camille Grammer / Meyer - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
Instagram မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Camille သည် Club MTV တွင် dancer အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သရုပ်ဆောင် Kelsey Grammer နှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ကွာရှင်းရန်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော RHOBH ၏ဖြစ်ရပ်သည်အရွယ်ရောက်သူ ၁၈-၄၉ ကြားတွင်နံပါတ်တစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကွာရှင်းမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါ Camille သည်ဒေါ်လာ ၃၀ မှ ၅၀ မီလီယံအထိအခြေချမှုရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ခြေထောက်ပေါ်သူမပျော်ရွှင်စွာကြည့်လိုက်ပါ၊ သူမခါးပတ်အောက်၌ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ၀ န်းကျင်စဉ်းစားနေသည်။ အဘယျသို့သောဘဝ။
၃။ Kyle Richards - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
Instagram မှတစ်ဆင့် @ kylerichards18
Beverly Hills မှရီးရဲလ်အိမ်ရှင်မများအသင်းမှနောက်ထပ်သရုပ်ဆောင် Kyle Richards သည် Halloween၊ Little House on Prairie နှင့် The Woods In The Watcher စသည့်ရုပ်ရှင်များတွင်သရုပ်ဆောင်ထားသောကလေးသူငယ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Mauricio Umansky နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၂၄ နှစ် (ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ)၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအားဖြင့် (လူကြီးလူကောင်းမဟုတ်) ။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ် ဦး သည်သူတို့၏သမီးလေး ဦး မွေးနေ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာပွဲများကျင်းပပြီး Kris Jenner ၏ကျော်ကြားသောခရစ်စမတ်အကြိုပါတီပွဲကိုလည်းတက်ရောက်ကြသည်။ ငါမှာအားလုံးဂျယ်လ်ဘူး။ အိုးနှင့် Kyle ရဲ့တူမ Paris Hilton ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကာရိုးအက်ဇီဗီးလ် - ဒေါ်လာသန်း ၅၀
Instagram မှတစ်ဆင့် နေပြည်တော်
နယူးယောက်စီးတီး၏ရီးယဲလ်အိမ်ရှင်မဟောင်းများအသင်း ၀ င်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ယခင် PRINCESS အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်မမေ့ပါနှင့်၊ ကာရိုးသည်နယူးယောက်ရှိအီတလီလူတန်းစားမိသားစုတွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ASAP pls တစ်ယောက်မင်းကိုရှာတွေ့နိုင်မလား။
၁။ Lisa Vanderpump - ဒေါ်လာ ၇၅ သန်း (ဟုတ်ကဲ့၊ သင်မှန်ကြောင်းဖတ်ပါ)
Instagram မှတစ်ဆင့် အရန်စုပ်စက်
Ahh, အိမ်ရှင်မမင်းသမီး၏မိဖုရား (နှင့်ဒါကြောင့်ပုံရသည်ကြွယ်ဝသောဖြစ်ခြင်း) ။ မူလကလန်ဒန်မှ Lisa Vanderpump သည် LA တွင်ကြွယ်ဝစွာနေထိုင်သည်။ ယခင်ကြယ်ပွင့်နှင့် Beverly Hills ရှိ Real Housewives အသင်း၏သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
သူမ၏စားသောက်ဆိုင် 'PUMP' မှ 'Vanderpump Dogs' ဟုအမည်ရှိသည့်သူမ၏ခွေးကယ်ဆယ်ရေးစင်တာသို့ Lisa Vanderpump ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကသူမနှင့်သူမတို့၏အနှိုင်းမဲ့အမျိူးသမီးအားလုံးအားအချမ်းသာဆုံးအိမ်ရှင်မများအားဖမ်းဆီးသည်။ အနည်းငယ်သူမ၏ခက်ခဲ - နှိပ်သူမ၏ခွေးဖြစ်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသာမန်ထက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်း, မဟုတ်ပါဘူး။ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံစားဖူးပါသလား x အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ
Instagram @ မှပုံရိပ် kylerichards18
• အဖြစ်မှန်တီဗီကြွယ်ဝသောစာရင်း: ဤသူတို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ထိပ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးကြယ် ၃၀ ဖြစ်သည်
• အဆင့် - ဤသူများသည်အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးမိသားစုများ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်